Macmalay by Apple, iPhone waxaa calaamadeeyey sida mid ka mid ah kuwa ugu caansan touchscreen telefoonada smart adduunka ee isku daraa shaqeynta aasaasiga ah ee telefoonka gacanta iyada oo functionalities kale oo horumarsan, sida dhirta internetka, sawir dusha iyo GPS. Waxa aanu kaliya ma ogolaan user in ay sameeyaan multitask, waxa ay sidoo kale u ogolaataa user ay u astaysto barnaamijka AqoonMaal, sida haddii ay ahaayeen kombiyuutar isaga u gaar ah oo ku saabsan go ka. Dhamaan dadka isticmaala iPhone astaysto gmail, oo u gaar ah ayadoo laga soo degsado iyo iibsigu barnaamijyadooda ka App Store ah. Waxaa jira in ka badan hal milyan oo Chine on App Store ka software processing image in qalabka raadraaca miisaaniyadda. Xitaa Waxaad isticmaali kartaa iPhone sida qalabka ammaanka guriga ah.
iPhone u Home Ammaanka
Marka la eego isticmaalka badan oo wax ku ool ah iPhone, ay timaado sida la yaab ma laha in sirdoonka cusub ee Chine casriga ah ayaa la soo saaray si wax looga qabto welwel ah ee ammaanka guriga iyo caawin mulkiileyaasha fog socdo xoolahoodii, iyo si ay u sheeg haddii ay jirto wax dhibaato ah.
Waxaa jira hadda in ka badan boqol codsiyada ammaanka guriga laga heli karaa App Store ah. Haddii ay kugu adag tahay in ay rumaystaan, isku day sameeyo baaritaan deg deg ah la 'ammaanka guriga' sida weedh muhiimka ah, oo waxaad ka heli doontaa in ay jiraan 693 natiijada. Inkasta oo aan dhammaan natiijooyinka raadinta waxaa si toos ah oo la xiriira 'ammaanka guriga', waxaa jira tiro ka mid ah codsiyada in xaqiiqo ah ay ka qiimo baadhitaan.
Qaar ka mid ah waxaa laga yaabaa in u baahan yihiin qalab dheeraad ah sida kamaradaha video halka qaar kalena ay si buuxda free yihiin. Ka dib oo dhan, tan iyo markii uu iPhone cusub waxay leeyihiin camera 8-megapixel ah iyo aperture ah f / 2.2, waxa ay taasi dareen kaliya u iPhone in uu laba jibaar sida kamaradaha ammaanka ah, iyo sidoo kale.
Ugu iPhone Apps ee Home Ammaanka:
iSentry waa app a free macruufka u saamaxaya in ay isla markiiba u noqon kombiyuutarada ay nidaamka ammaanka mooshin-markii cadaadis ah. All inaad samayso waa download app, farta camera aad ee gobolka aad rabto in aad la socon, iyo bilowdo qaata sawirada iyo video clips mar mooshinka la ogaado. ISentry ayaa sidoo kale la Timaadda badan oo xul ah goobaha kuu ogolaanaya inaad jadwal wakhtiga hawlgelinta, awood qaylodhaan dhawaaqa oo aad hesho ogeysiin email.
Agtiisa waa macruufka app lacag la'aan ah u jeesta aaladaha Apple Wi-Fi-karti jir galay kamaradaha ammaanka guriga. Asal ahaan, waxaad leedahay in la sameeyo oo dhan waa kala soo bixi app laba qalabka. Mid ka mid ah qalab u shaqeyn doonaa sida camera ah halka kan kale u adeegtaa sida xisaabshaha. Waxaad samayn kartaa qalab camera ee gebi ahaanba meesha ka mid ah guriga aad rabto in aad isha ku hay, markaas waxaad isticmaali kartaa qalabka kale ee macruufka si ay ula socdaan feed camera in waqtiga dhabta ah. App ayaa ku qalabeysan yahay feature-dhaanta mooshin ah in aad soo wargelin doonaa haddii ay jiraan wax dhaqdhaqaaqa ka hor qoslaysay kamarada. Waxaa si toos ah kuu soo diri doonaa shan labaad video clip via email, si aad mar walba sii joogi doonaa meesha ugu sareysa ee ammaanka gurigaaga xataa haddii aad tahay shaqada ama kulan ganacsi.
Fillooyinka ee $4.99, iCam ogol yahay dadka isticmaala in ay ku xidhmaan ku nool video iyo maqal ah cunaa ilaa iyo 16 aaladaha macruufka oo dhan hal mar. Waxaa ka shaqeeya la mid yihiin agtanada laakiin u oggolaanaysa in qalabka dheeraad ah in lagugu xiro waqti isku mid ah.
Sida Canary, kaliya app DropCam ee aad isticmaali karto ka dib markii aad iibsato ay camera oo link to mid ka mid ah qalabka macruufka aad. Waxay qaadataa mudo aan ka badnayn 60 ilbiriqsi qotomiyey. Marka camera la rakibo iyo app la rakibo oo waxay qotomiyeen on your Phone, si toos ah waxaad ka arki kartaa oo dhan video clips ku saabsan telefoonka. Waxa kale oo lagu duubay oo ku badbaadi la daawado ka dib. Plus, durdurrada video ay la wadaagi karto qoyskaaga iyo saaxiibadaa, iyo qeybsanaan ku xigeenka. Intaa waxaa dheer, DropCam ku qalabeysan yahay labo hab dhawaaqa, si aad u isticmaali karto sidii monitor ilmaha haddii taasi waa sida aad u rabto. Waxa kale oo la Timaadda shaqeynta zoom digital, si aad u dhow ula socon kartaa meel gaarka ah ee gurigaaga.
Waxaa dhiirigelintiisa lahaa mabaadiida Apple ee, iSmartAlarm waa-wax-uqabso hab ammaanka kuu ogolaanaya inaad si ay ula socdaan gurigaaga la isticmaalayo kaliya qalabka lagu magacaabo CubeOne iyo iPhone. CubeOne ayaa u dhaqmo sida maskaxda nidaamka ammaanka oo mas'uul ka yahay taasoo keentay in ay 'argagax' alarm. Waxaad ku koontarooli karaan meel kasta oo dunida ku isticmaalaya iPhone. iSmartAlarm ayaa sidoo kale iibinta camera ah in digsi karo, usii iyo isku shaandheyn la gashto si aad u hesho aragti 350-degree ee qolka. Its gashto waxaa ay ku taal Shell cad caag ah in ay ka ilaaliya biyaha, dhaawac, boodh, oo marada. Sidoo kale, xakamayn karto taasi adiga oo isticmaaleya isticmaale iPhone.
Maalmahan aadan runtii u baahan tahay in ay maal-gashadaan nidaam ammaanka guriga qaali u warhaysaa gurigaaga 24/7. Hadda, iyada oo cirib ah oo fartaada, waxaad si fudud u soo bixi kartaa iPhone app ama labo in kuu ogolaanayaa inaad isha ku hay inaad gurigaaga ka meel kasta oo aad.
Haddii aad dooneyso inaad ogaato haddii carruurtaada ay si ammaan ah u sameeyey guriga dugsiga, ama in la hubiyo in guriga laga ilaaliyo wax kasta oo budhcadnimo ama sharci darro ah xadayaan, waa kuma waa mid raysasho leh inaan ogaado ammaanka guriga waa in timirta ahaa oo gacmahaaga?
> Resource > iPhone > Talooyin Sida loo Isticmaalo iPhone ku hayso shacabka System Home